बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएका एमाले कार्यकर्ता रावतमाथि भेरीमा नर्स कुटपिटको आरोप – Health Post Nepal
२०७८ जेठ १४ गते ११:१९
अहिले भेरी अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
3 thoughts on “बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएका एमाले कार्यकर्ता रावतमाथि भेरीमा नर्स कुटपिटको आरोप”
यो अत्यन्तै शर्मनाक र अमानवीय घटना हो । यो झोले रावत लाइ कडा कारबाही हुनपर्छ ।।
very sad feeling,
होइन ए जनताको प्रिय र जनसमर्थित भन्ने र हून खोज्ने सरकार…!!! एस्तो पितृसत्तात्मक सोच बोकेको बेक्ती जो महिलालाइ हात उठाएर आफुले के के न गरे झैं ठान्ने र मर्द हुँ मान्ने पाजी नेतालाइ नै भनिन्छ एउटा सडेको आलु जसले सिङ्गै बोराको अरु सद्धे आलु पनि सडाउँछ भनेर….!!! येस्तालाई हदै सम्मको काम कारबाही गर्नु पर्यो सरकार, यो नै छ सारा जनताको पुकार….!!! होइन भने, स्मरण रहोस, चुनाब निकट छ र आम जनताले एस्तो नेता भएको पार्टीको हिसाब किताब चुनाबमा अबस्य नै गर्ने छन, येदि चेतना भय..!!!